Ciidanka Azerbaijan oo gudaha ugalay Degmada Aghdam kadib hishiiskii xabad joojinta+(SAWIRRO). | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Ciidanka Azerbaijan oo gudaha ugalay Degmada Aghdam kadib hishiiskii xabad joojinta+(SAWIRRO).
Ciidanka Azerbaijan oo gudaha ugalay Degmada Aghdam kadib hishiiskii xabad joojinta+(SAWIRRO).
Ciidanka Azerbaijan ayaa sheegay inay gudaha ugaleen degmada Aghdam, oo ah tii ugu horeysay seddexdii ay dib u celiso Armenia iyadoo qeyb ka ah heshiis nabadeed oo ay garwadeen ka uu ka yahay Ruushka si loo joojiyo dagaalka ka socda gobolka Nagorno-Karabakh.
“Cutubyo ka tirsan Ciidanka Azerbaijan ayaa gudaha galay gobolka Aghdam 20, Noofambar oo maanta sida ay shaacisay wasaaradda difaaca Azerbaijan waana degmo ku dhowaad 30 sano ka arriminayeen kooxaha gooni u goosadka ee Armenia.
Iyadoo qeyb ka ah heshiiskii nabadeed ee usbuucii la soo dhaafay, Armenia waxay ogolaatay inay dib u celiso qaar ka mid ah 15 illaa 20 boqolkiiba dhulkii Nagorno-Karabakh ee ay qabsatay Azerbaijan dagaalladii ugu dambeeyay, oo ay ku jirto magaalada taariikhiga ah ee Shusha.
Armenia waxay sidoo kale ku wareejin doontaa degmada Kalbajar ee u dhaxaysa Nagorno-Karabakh iyo Armenia sido kale 25 bishaan iyo degmada Lachin ugu dambayn 1da bisha soo socota.
Is-weydaarsiga dhulku wuxuu markii hore ahaa inuu bilowdo Axadda, iyadoo Armenia ku nool degmada Kalbajar ay u carareen si wada-jir ah ka hor inta aan la gaarin xilliga rasmiga ah ee la wareegidda Azerbaijan.
Laakiin Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa dib u dhigay waqtigii loogu talagalay oo ah hal toddobaad isagoo tixgalinaya “bani’aadamnimada”.
Xiisadii u dhaxeysay wadamadii hore ee Midowgii Soofiyeeti ayaa gaartay meeshii ugu sareysay September 27, markii isku dhacyada Azerbaijan iyo ciidamada qowmiyada Armenia uu ka qarxay deegaanka Nagorno-Karabakh iyo deegaannada ku xeeran.
Nagorno-Karabakh waxay ku taal Azerbaijan laakiin waxaa sanado badan haystay qowmiyadaha Armenia.
Inta badan degmada Azerbaijan ee koonfur-galbeed ee Aghdam waxay ku jirtay gacanta kooxaha gooni u goosadka ah ee Armenia ilaa 1993. Dagaalkii Soofiyeeti ka hor, waxaa ku noolaa ilaa 130,000 qof – oo u badan qowmiyadaha Azerbaijan oo laga saaray guryahoodii.
Iskahorimaadkan oo socday muddo lix toddobaad ah ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 1000 qof, oo ay ku jiraan dad rayid ah oo labada dhinacba ka tirsan.
10-kii Nofeembar, labada dal waxay kala saxiixdeen heshiis ay garwadeen ka ahayd Ruushka oo lagu joojinayo dagaalka isla markaana looga shaqeeyo sidii xal buuxa loo gaari lahaa.
Previous articleDhaqaatiir ka socota Soomaali iyo Turki oo Muqdisho ka bilaabay Kulamo caafimaad oo aqoon kororsi ah.
Next articleTirada guud ee kiisaska coronavirus ee Dalka Hindiya oo kor u dhaaftay 9 milyan.